1 Mans darījums
4 2- Šandisa Nguva Kuronga Mafungiro Ako
6 4- Sērija Mabasa Ako
12 10- Ārpakalpojumi
nyora uye uzviparidze zvinyorwa zveBoxNUMX e-grāmatas
kuparidzira pamusoro pe5 000 emuāra ziņas pamusoro pebasa rangu rokugadzira
vanoita seve pozēt
126 kodumu e-grāmatas kuAmazon.
Mumwe anotungamirira mukati; zvishandiso hazvingakuiti kuti uite uye iwe pachako. Inoshandisa mudziyo (waka iwe) inosarudza huwandu hwavo hwekubereka nekufamba muzviito zvinobudirira zuva rega rega. Zvimwe zvishandiso zvinogona kuwedzera kukura kwako zvakanaka asi mudzi wezvinhu zvose zvinobudirira zvinobva78ti memafungiro ako.
Tora iyo kubva kune mukomana akanyora uye akazvinyora-akaburitsa 6000 izwi eBook zuva rega regu panguva ye3 mwedzi yakatambanudzwa makore mashoma apfuura. Zvese zvaunoda kuve hyper inobereka inogara mupfungwa dzako, iko zvino. Zviri kwauri kuti usunungure chikara chinobereka.
Wana pachena pane musiyano pakati pekubudirira uye basa. Nhamba yezviito zvakapera hazvirevi chinhu. Kubudirira shure kwekugadzira kwako kunoreva zvose.
Tarisa rūts pfungwa yekuroveraging. Iva nekubudirira kusvika attēluhu vakawanda vanofarira sezvinobvira.
Unokunda hapana menduru dzekunyora uye kuburitsa 5 yevaenzi mazuva ese kana iyo mhando yekushambadza Isina kunaka. Mēs uri nani rūts kunyora uye kushambadza 1-2 yakakwirira mhando, yakanangwa, traffic-kutyaira yevashanyi mitezo.
Ini ndakanyora 100 e-grāmatas mumwedzi ye3 nekuti pfungwa dzangu hadzina kukanganiswa nekufunganya nezvekutsvaira imwe ye-eBook kuburikidza nemhirizhonga yekusimudzira. Ini akanyora nokuda kwemufaro wekunyora. Kunyatsodzivirirwa kubva pamigumisiro panguva iyi yekunyora ndakatora eBook zuva rega rega kwemwedzi ye3.
Zviri nyore kugadzira kana usinga zive nezvibereko zvekugadzirwa kwako.
2- Šandisa Nguva Kuronga Mafungiro Ako
Ndaida kugovera zvishoma zvandaiita zuva nezuva zvandinoita kuti ndikubatsire kuva dinamo inobereka.
Tarisa pane kufema kunopinda mukati nokunze kwemhino dzako. Apo kunyatsoteerera kwako kunopera kure nemashoko ako okufema chinhu chaunofunga-pfungwa, kunzwa kana chimwe chinhu kunze kwako – uye zvinyatsofambisa pfungwa dzako kudzokera pakufema kwako.
Fungisisa nguva dzose nokuda kwekutuka kwakasimba kwekubhururuka chokwadi serums. Iwe unogona kupika kuti iwe unoda kuva unobereka zvinoshamisa asi kana zvakanyanyisa-zvaunotenda zvisinganzwisisiki zvinoreva zvimwe zvakashata zvako zvinokunda nguva dzose. Zvichida kusvikira iwe unotya kutya-based, kuvhara sarnasda kunopera. Kufungisisa ndicho chinhu chakakosha chekutora kāda chero kupi zvayo.
Dzorera dial kuti inotonhora. Hora pasi pemvura yekutsvaga jūs 30 kusvika ku60 sekundes.
Kunyange zvakadaro hauna kugutsikana nehodha yewadha bit? Teerera kune mumwe mudzidzisi akakurumbira wenyika uye nyanzvi yakaisvonaka Tonijs Robbins anotaura pamusoro pei simba remvura inotonhorera.
4- Sērija Mabasa Ako
Pirmā 50 partijas minūte – nyora blog yako inotevera
3. 50 mutsara wemaminiti – rondedzera pane 5 populārākie emuāri kubva munharaunda yako
4. 50 mutsara wemaminiti – shingai shamwari nevateveri mumagariro evanhu
5. 50 mutsara wemaminiti – nyora muteveri wako mushure
Mutsva emuāru autore inogona kushandisa imwe nguva yakakosha pane mamwe mabloggi’s social media masiti kuti agovere uye ataure zvemukati zvemukati.
Tsvaga imba jakanyarara. Kana kuti ipai mahwindo maviri-kutinhira mahwindo.
Vhura chigwaro cheShoko. Nyora. Tora chibvumirano mushure mokunge uchinge warova chinangwa chezuva nezuva.
sora chigwaro cheShoko mushure mekurova chinangwa chako kukudziridza tsika yekudzivisa kubva pakunyora kwako
Ieteicamais lasījums: Kunyora Kwaungaita 10 000 Mashoko muZuva Rimwechete
Mana Tweetdeck ekrānuzņēmums.
Zvinhu zvako emuāru veidošanas kampaņas ārpakalpojumi – kuti urambe uchibereka.
Svondo rapera emuārs yangu yakaparara kwemaawa anopfuura 24.
Bhara vanhu kuti vaite zvakananga mabhogiji mabasa kuitira kuti iwe upe nguva yako nesimba nesimba nesubba rokubudisa mabhuku mabhuku, eBooks, mafundo uye basa.
KuBuena Vista, Kostarika.